Window7& Vista Language Pack ချိန်းနည်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Window7& Vista Language Pack ချိန်းနည်း
By နေမင်းမောင်12:22 AM9 comments
အခု ကျွန်တော်ရေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝင်းဒိုးတင်တဲ့ အချိန်မှာ အသစ်တင်ထားပေ မယ့် ကျွန်တော်တို့ Origional Window ကို ပြန်သုံးဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေလို့ပါ။ အဓိက ကတော့ Laptop သမားတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအလိုက် Laptop တွေ ဝယ်တဲ့ အချိန်မှာ သူတို့နိုင်ငံ ရဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ Origional Window တွေဖြစ်နေတာများပါတယ်။ အခုအစ်ကိုတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာနဲ့ သွားတိုက်ဆိုင်နေလို့ ကျွန်တော်လည်း ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော် တို့ အဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ မသုံးချင်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ English Language နဲ့ သုံးမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ကိုသွားချိန်းရင်တော့ တော်တော်တော့ ပိုက်ဆံကုန်မှာပါ။ အခုကျွန်တော်တို့
အလွယ်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်းကြရအောင်ဗျာ။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ Language Pack တွေကို ဒီဆိုဒ်လေးကနေ Download ဆွဲမယ်ဗျာ။
ဒီဆိုဒ်လေးမှာ ကျွန်တော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဝင်းဒိုးတွေအများစုက RTM ပဲများပါတယ်။ အောက်က ပုံလေးမှာပြပေးထားပါတယ်။ Window Vista နဲ့ Window7အတွက် Language Pack တွေပါဝင်ပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ Window7ကို အမျိုးအစားအလိုက်ရွေးပါမယ်။ အောက်မှာ ဝင်းဒိုး7အတွက် ၄ မျိုးရှိပါ တယ်။ မိမိတို့ စက်အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်အခု ဘယ်ဘက်မှာ မြှားလေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Laptop 64 Bit ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒုတိယမြောက်ကကောင်လေးကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် မိမိတို့ ချိန်းလိုတဲ့ Language Pack လေးတွေကို နှိပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော် တိုက်ရိုက်ချပေးပါလိမ့်မယ်။ Direct Links တွေဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ OS အလိုက်ခွဲပေးထားတဲ့ အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော် Window7Home Premium 64 Bit ကို ကျွန်တော်ချိန်းထားပြီးသား အဆင်ပြေတဲ့ ကောင်လေးကို အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ တူတဲ့သူတွေကတော့ ဆိုဒ်မှာ သတ်သတ်ကြီး သွားမယူရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်နည်း လေးပြောပြပါ့မယ်။ အောက်မှာ လည်း ကျွန်တော် Video File လေးကိုပါတစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Video File လေးကိုကြည့်ပြီးမှ အသုံးပြုရင်လည်းရပါတယ်။ အဆင်ပြေသလိုပေါ့ဗျာ။ ကဲကျွန်တောတို့စပြီး လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ Vistalizator လေး ကိုအရင် Download ဆွဲပါမယ်။ ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Download ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ Download Vistalizator ကျွန်တော် ကွင်းလေးနဲ့ ဝိုင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို နှိပ်ပြီး Vistalizator လေးကို အရင်ယူလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Language Pack ကို Download ဆွဲပါမယ်။ အောက် မှာကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ဘက်က Tools လေးတွေမှာ မိမိတို့စက်အလိုက်ရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် မိမိတို့ ချိန်းလိုတဲ့ Language Pack လေးကိုရွေးပြီး Download ဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး Download ယူထားတဲ့ Vistalizator လေးကိုအရင် Run ပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ Run လိုက်ရင် အခုပုံစံလေးအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။
ဒီမှာ ကျွန်တော် စက်ထဲမှာ လက်ရှိအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Language တွေပါ။ ဘေးနားက Add Languages ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ ဒုတိယမြောက်ချထားတဲ့ Language Pack လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ရွေး ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Change Language ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပြီး ပြောင်းလိုက်ပါ ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Language ချိန်းတာလေးကို အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အောက်မှာ Video ဖိုင်လေးနဲ့ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အခုအောက်မှာ ကျွန်တော် Window764 Bits အတွက် Language Pack လေးကို အောက်မှာ တင်ပေးထား ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေယူထားလိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ 32 Bits တွေနဲ့ Vista အတွက်ကတော့ မူရင်း ဆိုဒ်လေးမှာ သွားယူပေးပါဗျာ။
စီးပွားရေးအရ အသုံးချ ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရွှေမင်းသား October 3, 2011 at 8:48 PM
Vistalizator ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အောက်က စာသားပေါ်ပြီး ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ဘူးဗျာ..ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး...
Vistalizator 2.40:Error Loading system configuration!
Some errors occurred during initalization:
Unable to use this virsion of Windows7.This build (7601)is not supported.
Sorry,I cannot continue.Please write to vistalizator@gmail.com to get help.
မီးအိမ်ရှင် October 13, 2011 at 8:29 PM
lifepoem November 16, 2011 at 6:11 PM
ကျွှန်တော့ တို့တွေရဲ့ laptop မှာပေါ့ destop ပေါ်မှာ မြန်မာလိုရိုက်ချင်တာ ဘယ်လခိုလုပ်ရမလဲနော်....ဥပမာ computer ဆိုတာကို မြန်မာလို ရေးပြီးတော့ file name တွေပေးချင်တာကော ရလာူးခင်ဗျာ...ရမယ်ဆိုရင်တော့ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...ကျေးဇူးပြ၍ ပြေပြပေးပါလား...မျော်နေမယ်...
နေမင်းမောင် November 17, 2011 at 2:52 AM
ဒီအောက်ကလင့်မှာ ကြည့်လိုက်ပါအကို ..
arkar December 5, 2011 at 10:34 AM
နေမင်းမောင် December 5, 2011 at 9:19 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အခုတင်ပေးထားတဲ့နည်းလမ်းက Windows7SP 1 အတွက် Support မလုပ်ပါဘူးအကို .. အဲ့ဒါကြောင့် အဆင်မပြေတာပါခင်ဗျာ ..
Hanzawtun Aye Thu Kha July 14, 2012 at 4:12 PM
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ. ကျွှန်တော် တော်တော်များများဒေါင်းသွားပါတယ်..
Hanzawtun Aye Thu Kha July 14, 2012 at 4:17 PM
ကျွှန်တော့် window764 bit မှာ မြန်မာလိုပဲ ရိုက်လို့ရတယ်။ Elglish လိုရိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ctrl shift တွေ လဲစုံနေအောင်နှိပ်ပြီးသွားပြီ... ကူညီပါအုံးအကို